FANAMBOARANA NY RAVINALA AIRPORTS: Vaky bantsilana ny afera maloto nataon’ny ekipan-dRajaonarimampianina – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:54
Efa am-perinasa ny seranam-piaramanidina vaovao etsy Ivato.
Accueil/Politika/FANAMBOARANA NY RAVINALA AIRPORTS: Vaky bantsilana ny afera maloto nataon’ny ekipan-dRajaonarimampianina
FANAMBOARANA NY RAVINALA AIRPORTS: Vaky bantsilana ny afera maloto nataon’ny ekipan-dRajaonarimampianina
Saron'ny banky iraisam-pirenena ny kolikoly avo lenta sy halatra tamin'ny nanamboarana ny seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato, izay natao tamin’ny Fitondrana teo aloha HVM. Tamin’ny ankapobeny, voatsinkafona tao anatin’ny fampitam-baovao navoakan’ny Banky Iraisampirenena avokoa ireo teboka rehetra nisiana raharaha tsy mazava tamin’ny fananganana ity fotodrafitrasa ity. Raharaha izay nahatonga fanasaziana ho an’ireo orinasa telo nandray anjara tamin’ny fanaovana ny asa, dia ny Colas Madagascar, Bouygues Bâtiment International, ADP International.
Taorian’ny halatra nisy tao amin’ny Jirama nandritra ny fitondrana HVM tamin’ilay tetikasa PAGOSE nanomboka ny taona 2016 ka nahatonga ny JIRAMA voasazy namerimbola ankehitriny, dia nanao fanadihadiana momba ny fampiasana ny vola nanamboarana ny Seranam-piaramanidina vaovao Ivato indray ny Banky Iraisam-pirenena. Taorian’ny fanadihadiana nataony, dia namoaka fanambarana ny Banky Iraisam-pirenena fa tsy mazava ny fitantanana ny vola nanamboarana ny Aeroport Ivato ary nisy ny halatra sy ny kolikoly avo lenta nataon’ny Fitondram-panjakana tamin’izany nanomezana ny tsenambarotra tsy nandalo tolo-bidy ho an’ny orinasa Colas izay nikarakara fihaonana manokana tamin’ny mpitondra fanjakana teo anelanelan’ny 04 Fevrier 2015 sy 04 Mai 2015, izay tsy ara-dalàna io fihaonana io ary miendrika kolikoly avo lenta araka ny nambaran’ny Banky Iraisam-pirenena.
Voasazy tsy afaka manao ny asa rehetra vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena mandritra ny 2 taona noho izany ny orinasa Colas. Toy izany koa ny orinasa Bouygues Bâtiment International sy ADP International anisan’ireo orinasa tao anatin’ny nanamboatra ny Ravinala Airport izay nanatrika sy nandray anjara tamin’izany fihaonana tsy ara-dalàna izany, voasazin’ny Banky Iraisam-pirenena ihany koa.
Fanitsiana ny fifanarahana
Afa-baraka tanteraka ny Fitondrana HVM. Ekena, fa ireo orinasa telo nandray anjara tamin’ny fanamboarana no niharan’ny sazy mivantana. Saingy, mazava ho azy fa tsy ho vitan’ireto orinasa telo ireo irery ny namondrona ny antontan-taratasy natolotra ny Banky Iraisampirenena mba hahazoan’izy ireo ny tsena fa tsy maintsy nisy diantanan’ny mpitondra teo aloha (HVM). Tsy afa-miala tamin’izao raharaha izao mihitsy, noho izany, ny ekipan’ny Filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina. Ity fotodrafitrasa vaovao eo Ivato ity rahateo izay hireharehan’izy ireo fatratra fa asa tanan’ny HVM. Ankehitriny, vakian’ny Banky Iraisampirenena bantsilana ny afera maloto rehetra nihodina tao ambadik’izany. Raha tsiahivina, na dia efa ela aza no vita ity seranam-piaramanidina vaovao eo Ivato ity, dia nihisatra tanteraka ny fitokanana azy. Tsy noho ny antony ara-politika akory, fa noho ny fanadihadiana manokana nataon’ny Fitondrana ankehitriny mba ho fijerena tsara ny fifanarahana nataon’ny Fitondrana teo aloha, mahakasika ny fitantanana ny toerana. Ankehitriny, teboka ampolony tamin’ny fifanarahana no tsy maintsy nitondrana fanitsiana.
Ankoatra izay, tsy mazava avokoa ny fampiasambola tamin’ny nanamboarana ity Ravinala Airports ity. Raha tokony ho 50 millions de dollars tahaka ny nanamboarana ireo Seranampiaramanidina goavana rehetra taty Afrika dia ampy, dia tafakatra hatramin’ny 240 millions de dollars ny vola nolanian’ny fitondrana HVM nanamboarana ny Ravinala Airports, izay mbola nanaovan’ny Filoha teo aloha Rajaonarimampianina fifanarahana manokana nampitantanany ny vahiny mandritra ny 28 taona izany seranam-piaramanidina Ivato izany.
ORINASA JIRAMA: Kamiao telo hofaina 567 tapitrisa ariary?
VOAHELOKA TAMINA FANODINKODINAM-BOLA: Nitsoaka any Eoropa ny Praiminisitra teo aloha, Jean Ravelonarivo
MINISITRA LALATIANA ANDRIATONGARIVO SY NY VADINY: Fanenjehana mifototra amin’ny lainga sy tsaho no atao azy ireo
MOZIKA MALAGASY: Misaona ny tontolon’ny kanto, nodimandry i Taa Tense